I-Tiger Woods ayisebenzi kubuthathaka bayo | Martech Zone
I-Tiger Woods ayisebenzi kubuthathaka bayo
NgoLwesithathu, Meyi 9, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Guqula oku yindawo entle ukuba khange ube nethuba lokuyibona. IIMHO, namhlanje Manifesto ibiyinto ekhethekileyo, nangona kunjalo.
Ngaba ngokwenene ucinga ukuba izingodo zeTiger Woods ziqhelisela iiyure ukugcina nje ezona zilula kuye? UFlip Flippen uthi ulibale ngokufumanisa amandla akho, endaweni yoko bubuthathaka bakho obukubambezela ekufezekiseni eyona nto uyiyo.
Inyani yile, uTiger Woods akasebenzi kubuthathaka bakhe konke konke. Uchonge amandla akhe kwaye uchitha ixesha elinzima kunye nomzamo wokulungisa loo mandla.
Kwiminyaka engama-39 ndimncinci, ndiye ndafumanisa ukuba zimbalwa kakhulu izinto ebomini, kodwa nazi izinto ezimbalwa:
Akunakwenzeka ukuba abantu batshintshe. Kodwa akunakwenzeka ukuba abantu bahlengahlengise-ngamanye amaxesha bafuna nje ukutyhala ngobunono.
Fumanisa ukuba yintoni le uyithandayo kwaye yintoni ogqwesa kuyo… kwaye ufumane indlela yokwenza imali ngayo. Awusoze wonwabe.
Iinkokeli ezijolise ekusileleni kwakho azizizo iinkokeli konke konke. Iinkokeli eziyinyani ziyaziqonda izinto ezilungileyo ebantwini kwaye zilungelelanisa iinjongo nobuchule. Akukho bantu babini abafanayo kwaye akufuneki nanini thelekisa omnye komnye.
Iinkokeli ezichonga umqeshwa azinakuphumelela ziya kumenzela umsebenzi olona luvo lubalaseleyo ngokubanika umkhombandlela apho banokuphumelela khona, nokuba kungaphandle komnyango. Kukukhohlakala ukubeka abantu kwindawo yokusilela kwaye ubagcine apho.
Xa unika abantu ithuba lokuphumelela, banqabile ukusilela.
UFlip ubuza ukuba, "ukuba uyandikholelwa, nokuba awuyikholelwa loo nto, phendula lo mbuzo: Yeyiphi eyona nto inokubamba umva ekusebenzeni nasekuzalisekeni?"
UFlip ucinga ukuba bubuthathaka bakho obukubambayo. Andiqondi ukuba konke konke. Ndiyakholelwa ukuba into yokuqala ekubambezelayo kukuba awuchonganga kwaye ufumene indlela yokusebenzisa amandla akho ngokupheleleyo.
Ndiyigolfer ekrwada. I-Tiger Woods yigolfer enkulu. Ukuba ndichitha ubomi bam bonke ndizama ukuphucula umdlalo wam wegalufa, ngekhe ndihlangane nomdlalo weTiger Woods. Andizukuchitha ixesha ekuphuculeni umdlalo wam wegalufa- ndizokuchitha ixesha elininzi ekubeni yingcali kwezobuchwephesha kunye nomcebisi. Yiloo nto endikwaziyo ukuyenza, nantso into endiyithandayo… kwaye yiloo nto eyondla usapho lwam. Ndifuna ukuqonda ukuba yintoni eza kuthatha ukuya phezulu kumdlalo wam-kuba ndiyazi ukuba sele ndikulungele.
Umahluko phakathi kokuchaneka kwe-99.9% kunye nokuchaneka kwe-100% yi-0.1% kuphela. Kodwa yile 0.1% efuna ukugxila kunye nomzamo wokuloyisa. Ngamanye amaxesha ayinakuze yoyiswe. UTiger Woods uchonge amandla akhe amzise kuma-99.9% kwaye usebenzisa onke amandla akhe ukuzama ukugqiba i-0.1% yokugqibela. Unokuchitha lonke ixesha lomsebenzi wakhe uzama kwaye ngekhe afike apho. Isitshixo sempumelelo yakhe, nangona kunjalo, kukuba uyaqonda ukuba ngawaphi amandla akhe kwaye unentembelo yokuba unokuzityhalela ngokupheleleyo kwi-100%.
Omnye wabaphathi bam bakubeka ngokulula. Isitshixo asisokuze silunge ukuba sisando kwaye isando asisokuze silunge kwisitshixo. Ukuba uyinkokeli, jonga into onayo kwibhokisi yezixhobo zakho kwaye uyisebenzise ngendlela efanelekileyo. Ukuba usebenza ngokwakho-khangela ukuba uyisitshixo okanye isando.
Kutshanje ndiye ndahlala umntu phantsi kwaye, echaphazelekayo, wandazisa ukuba andilunganga. Ndicinga ukuba wayelindele ukuba ndingaphikisana okanye ndicaphuke. Ndikhawuleze ndancuma ndamjonga ndathi, "Ndiyavumelana nawe!". Inyani yile, into endingenakulunga kuyo ayisiyiyo into endifuna ukuyenza kwaye ibingeyiyo le bendifanele ukuyenza!
UFlip ubhala athi, "Ukuze senze konke okusemandleni ethu, kwaye kufuneka sifunde indlela yokunciphisa iingxaki zethu zokuziphatha ngelixa sandisa amandla ethu kuba impumelelo yokwenyani ifuna ngaphezulu kwetalente kunye namandla."
Ndingayichaza le nto kwaye ndithi, "Ukuze senze okusemandleni ethu, sinako? Kwaye kufuneka? Sifunde indlela yokwandisa amandla ethu kuba impumelelo yokwenyani ifuna ngaphezulu kwetalente kunye namandla."
Inqaku elifanelekileyo nguMichael Jordan, ngokuqinisekileyo yenye yezona ntshatsheli zibalaseleyo zomhla wethu. UMichael Jordan wenze into ephezulu kumdlalo wakhe kwaye waziva ukuba akanakwenza ngcono. Uyenzile ukuya kwi-100% yakhe. Ngokukhawuleza akwenza oko, wabuyela kwi-baseball. Wakhawuleza waqonda ukuba akazukuba ngumdlali webhola omkhulu.
IIMHO, kanye xa uMichael Jordan wayechonge ukuba, nangona wayengumdlali webhola efanelekileyo, ngekhe abe ngumdlali webhola omkhulu. Uwushiye umdlalo awuthandayo wabuyela kumandla akhe. Namhlanje, uMichael Jordan useyintshatsheli. Eqonda ukuba amandla akhe awasayi kuphinda abe yibhasikithi, uchonge ukuba ishishini yayingumdlalo wakhe olandelayo ukuba avumelane, kwaye usebenza kuloo 0.1% ukumsa phezulu.
Chonga amandla akho kwaye wandise. Sukuchitha ixesha kubuthathaka bakho. Ukuba uyakwazi ukuphucula ubuthathaka bakho, eyona nto unokuyithemba nge-avareji. Akukho mntu ufuna ukuba phakathi.
Ngoku ka I-Wikipedia, iTiger Woods uyakonwabela ukusebenza ngokuzilolonga, ukuhamba ngesikhephe, imidlalo yezamanzi, ukuloba, ukupheka kunye nokubaleka iimoto. Awucingi ukuba iTiger izakubalekela uMnu Universe kungekudala, i-Bass Masters, okanye i-Indianapolis 500 kungekudala, uyayenza? Ewe, andicingi njalo.
Uhlalutyo lukaGoogle lufumana ujongano oluLungileyo lweNgxelo (iBeta)
Ii-RPM zebhlog zakho zi-Pegged, kodwa awuphumeleli ugqatso!
Meyi 9, 2007 kwi-11: 12 PM
WOWU! Ndiyavumelana kakhulu nale nto uyibhalileyo. Ekuphela kwento endingavumelaniyo nayo kukuba phantse akunakwenzeka ukutshintsha. Kodwa ndiyakuthi kunokuba nzima kakhulu ukutshintsha kwaye kulula kakhulu ukuhlala kwimo ekhoyo kunokwenza utshintsho olufunekayo ngokweemvakalelo kunye nangokwengqondo.
Sendiyithethile loo nto – ndilikholwa eliqinileyo ekwakhiweni kwamandla. Xa uzama ukunqoba ubuthathaka, ngokuphindaphindiweyo ukugxila kubuthathaka kuyakwandisa (isiphumo esingalindelekanga).
Kodwa ukwakha phezu kwamandla kufana ne-SEO yezinto eziphilayo. Amandla akho ngokwendalo aqala ukunciphisa ubuthathaka bakho (njengomxholo olungileyo kunye namakhonkco).
Nangona kunjalo, iposti enkulu. Ilwenze usuku lwam ngokupheleleyo, yaqinisekisa iinkolelo ezingundoqo. enkosi!
Meyi 9, 2007 kwi-11: 35 PM
Ndivuma ngokupheleleyo u-Doug - umahluko phakathi kokulunga kwinto ethile nokuba mkhulu kukuba okokugqibela nge-0.1%. Baninzi abantu abanokufikelela kuma-99.9% amanqaku, kodwa bambalwa kakhulu abanokoyisa okokugqibela nge-0.1%. Oku kuyinyaniso malunga nawo nawuphi na umsebenzi, nokuba yigalufa, ukufota, okanye inkqubo.
Meyi 10, 2007 kwi-7: 57 AM
I-Great Post Doug, ndiyavuma ukuba kufuneka siphuhlise amandla ethu, ingxaki xa sisebenzela abanye bahlala begxila kuloo nto kunye nawe kwaye bahlala bezama ukufumana ubuthathaka bakho ngaphambili kwaye uzame ukugrumba ukuze balingane. kumandla akho.
Ndiyavuma ukuba iinkokeli ezinkulu zijolise kwaye zikhuthaze uphuhliso lwamandla akho, xa ndinabaphathi abanaloo mbono ndiye ndaphumelela kwaye xa ndinabaphathi abagxile kubuthathaka khange ndonwabe.
Meyi 11, 2007 kwi-2: 14 AM
Isithuba esihle. Ndiyavuma ukuba akubalulekanga ukuphucula ubuthathaka bethu. Ngokuqinisekileyo zininzi izinto esingenabuchule kuzo kwaye asinakuchitha ixesha lethu siziphucula. Kufuneka sinikele ingqalelo kumandla ethu.
Meyi 14, 2007 kwi-8: 15 PM
Ndiyavuma ukuba sifanele sigxininise kumandla ethu kungekhona kubuthathaka bethu. Umsebenzi wethu usenokufuna ukuba siphucule ezinye iingxaki esinazo kwaye asinakusuka nje sizibethe ngoyaba. Kufuneka siqwalasele kwanezinto ezincinci kwiimeko ezithile.